Laamaha Amniga oo gacanta ku dhigay Nin Caawa weerar ka geystay Muqdisho - Awdinle Online
Weerar loo adeegsaday Bam nooca gacanta laga tuuro ah ayaa fiidnimadii Caawa lagu weerar Saldhiga Booliska degmada Xamarweyne ee Gobolkaan Baaandir, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
Nin hubeysan ayaa Bam gacmeedka ku tuuray Saldhiga Booliska degmada, isla markaana jugta Bamka ayaa waxaa laga maqlay xaafaddo dhow Saldhiga Booliska Xamarweyne, waxaana Ninka falkaas geystay uu isku dayay inuu si deg deg ah goobta uga baxsado.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya oo xiligaas ku sugnaa mee ku dhow Saldhiga ayaa gacanta ku dhigay Ninkii Bamka tuuray oo marka hore isku dayay inuu si dhaqsi ah ku cararo.
Ninka ayaa waxaa durbo lagu xiray mid kamid Saldhigyada ay leeyihiin Ciidanka Booliska dowladda Federaalka, isla markaana halkaas lagu weydiinayo su’aalo kala duwan.
Laamaha amniga dowladda gaar ahaan kuwa degmada Xamarweyne oo la hadlay Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa u sheegay in weerarkii Bam gacmeedka ahaa uusan geystan wax khasaaro ah.
Ciidanka dowladda Federaalka ayaa horey gacanta sidaan oo kale ugu dhigay rag hubeysan oo weerar ka geystay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, kuwaasi oo qaarkood isku dayay inay baxsadaan wallow markii dambe la qabtay.
Previous articleCiidamada Itoobiya oo la wareegay Magaalada Mekelle
Next articleMaxkamadda Ciidamada oo dil ku fulisay Macalinkii dilaaga ee Ilkacase & Xubno kale